यसरी बनाइयो राइन नदीलाइ प्रदुषण मुक्त, के सिर्सियालाई बनाउन सकिदैन ? - Nepal Post Daily
यसरी बनाइयो राइन नदीलाइ प्रदुषण मुक्त, के सिर्सियालाई बनाउन सकिदैन ?
बीरगंज, २ ज्येष्ठ — युरोपका सबैभन्दा ठुला नदिहरुको बारेमा कुरा गर्दा राइन नदि को नाम पनि अग्रपंक्तीमा आउँछ । स्वीजरल्याण्डको आल्प्स पहाडबाट निस्किने नदिको लम्बाई १ हजार २ सय ३० किलोमिटर छ । आल्प्स पहाडबाट निस्किने यो नदि फ्रान्स, जर्मनी र नेदरल्याण्ड हुँदै उत्तरी सागरमा पुग्दछ । राइन नदि युुरोपको सबैभन्दा महत्वपुर्ण जलमार्ग भएतापनि सफा स्वच्छ र निर्मल पानीका लागि दुनियमा प्रसिद्ध छ ।
सन् १९५० को दशक देखि १९७० को दशकसम्म प्रदुषणले भरिएको यो नदि उद्योगधन्दा, कलकारखानाबाट निस्कीने प्रदुषणले हेरी नसक्नुको थियो । कसैले सोचेको पनि थिएन की पछी आएर यो नदि सफा पानीको लागि चर्चाका बिषय बन्छ भनेर ।
जर्मनी, फ्रान्स र स्वीजरल्याण्ड मिलेर नदि सरसफाइ अभियान शुरु गरेर कडा कानुन बनाएपछि त्याँहाका जनतालाई जनचेतना जगाउनुका साथै नदि सफाइका लागि थुप्रै मेहनत गरेका थिए । फलस्वरुप त्यही परिश्रमको फल अहिले दुनियाभर यो नदि सफा नदिका लागि प्रसिद्ध छ ।
यो त भयो नेपाल बाहिरको कुरा अब आफ्नो देशमा भएका केही नदिका बारेमा कुरा गरेर आफ्नै देशको बेइजत गर्न नचाहेर पनि भन्नैपर्ने हुन्छ ।
हिन्दुहरूको एकमात्र आस्था र विश्वासको केन्द्रका रूपमा रहेको नदि हो बागमती नदी । हिन्दु जगत्को पवित्र तीर्थस्थल एवम् सभ्यताको प्रतीकको रूपमा रहेको बागमती नदी मानवीय अतिक्रमणका कारणले अत्यधिक प्रदूषित भई् अस्तित्वविहीन अवस्थामा पुगेको छ । बागमती नदि लाई सफा बनाउन सरकारले बिभिन्न कार्यक्रम ल्याएपनि ति कार्यक्रम सम्बन्धित समितिका पदाधिकारीले कमाइखाने भाँडो बनाएर आफ्नो जिवनस्तर सुधारे तर बागमती नदीको अवस्था कहिलै सुध्रिएन ।
देशकै प्रमुख भन्सार नाका बीरगंजको कुरा गर्दा बढ्दो जनसङ्ख्या, अनियन्त्रित शहरीकरण, अव्यवस्थित ढल निर्माण र औद्योगिक एवम् गार्हस्थ फोहरमैला निष्कासनले सिर्सिया नदिको अवस्था पनि प्रदुषीत बनेको छ ।
यस तर्फ पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान केन्द्रित नभएको होइन तर चेतनास्तरको कमी, देशभक्ति राष्ट्रप्रेमी र मातृभुमिलाइ माया गर्ने नेता तथा जनप्रतिनिधि भन्दा पनि आफ्नो गोजि भर्ने हरुको बिगबिगी हुँदा देशका थुप्रै प्राकृतिक सम्पदाहरु ओझेलमा परेको सबै नेपालिलाइ अवगत नै छ ।
परिणामस्वरुप अब पनि सबैले आँखा बन्द गरेर बस्ने हो भने बागमती, सिर्सिया जस्ता थुप्रै प्रदुषीत नदिका कारण भविष्यमा ठुलो संकट नआउलान भन्न सकिदैन ।
Previous articleलाइभ स्ट्रिमिङमा कडाई गर्दै फेसबुक, नियम नमान्नेलाई ब्यान्ड गरिने
Next articleएसिड आक्रमणबाट घाइते जेनीको अवस्था चिन्ताजनक, पैसा नहुँदा उपचारमा समस्या